Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah - MAGAALADA MAGAALADA → Dhismaha Magaalooyinka Yaryar ☆ Metalco ☆ Bellitalia
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah iyo cookies ("Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah")
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah waa muujinta daryeelka xuquuqda booqdayaasha websaydhada iyo adeegsiga adeegyada lagu bixiyo. Sidoo kale waa dhammaystirka waajibaadka macluumaadka ee ku xusan Art. 13 of Regulation of the European baarlamaanka iyo Golaha (EU) No. xog shaqsiyeed) (Journal of Law UE L2016 ee May 679, 27, p. 2016) (halkan waxaa loogu yeeraa GDPR).
Milkiilaha websaydhku wuxuu si gaar ah fiiro gaar ah u siiyaa ixtiraamka asturnaanta isticmaaleyaasha shabakadda. Xogta laga helo iyada oo qayb ka ah websaydhka ayaa si gaar ah loo ilaaliyay oo loo xafiday kahortagga marin-u-helka dadka aan ruqsadda haysan. Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah waxaa loo diyaariyey dhammaan dhinacyada ay xiiseynayaan. Websaydhku wuu furan yahay.
Mulkiilaha websaydhku wuxuu hubiyaa in hadafyadiisa xad-dhaafka ahi ay tahay in la siiyo dadka isticmaalaya websaydhka ilaalinta asturnaanta heer ugu yaraan u dhigma shuruudaha sharciga khuseeya, gaar ahaan qodobbada GDPR iyo Sharciga 18 Luulyo 2002 ee ku saabsan bixinta adeegyada elektiroonigga ah.
Milkiilaha websaydhku wuxuu ururin karaa xog shaqsiyeed iyo mid kale. Ururinta xogtan ayaa dhacda, iyada oo ku xidhan dabeecadooda - si otomaatig ah ama natiijada ficillada booqdayaasha websaydhada.
Qof kasta oo adeegsada websaydhka sikastaba wuu aqbalaa dhammaan sharciyada ku jira Nidaamkan Asturnaanta. Milkiilaha websaydhku wuxuu xaq u leeyahay inuu isbadal ku sameeyo dukumintigan.
Macluumaadka guud, cookies
Milkiilaha iyo hawl wadeenka websaydhku waa Water Point Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oo leh kursigeeda Warsaw, cinwaanka: ul. Fort Służew 1b / 10 Fort 8, 02-787 Warszawa, wuxuu galay Diiwaan Gelinta Ganacsatada ee Diiwaangelinta Maxkmadda Qaranka ee ay haysato Maxkamadda Degmada ee Warsaw, Qaybta Ganacsiga ee Diiwaanka Maxkamadda Qaranka, oo hoos timaad lambarka KRS: 0000604168, NIP lambarka: 5213723972, REGON lambarka: 363798130. Iyadoo la raacayo Xeerarka GDPR, milkiilaha websaydhku sidoo kale waa Maamulaha Xogta shakhsiga ah ee adeegsadayaasha websaydhada ("Maamule").
Ayadoo qayb ka ah howlaha la qabtay, Maamulaha wuxuu adeegsadaa buskud si uu u indho indheeyo oo u falanqeeyo taraafikada bogagga mareegaha, wuxuu kaloo qabtaa howlo dib-u-qiimeyn ah, hase yeeshe, iyada oo qayb ka ah howlahaas, Maamulaha kuma shaqeeyo macluumaadka shakhsiga ah macnaha GDPR.
Websaydhku wuxuu qabtaa shaqooyinka helitaanka macluumaadka ku saabsan isticmaaleyaasha websaydhka iyo dhaqankooda habka soo socda:
Websaydhku si otomaatig ah ayuu u ururiyaa macluumaadka ku jira cookies.
iyada oo loo marayo xogta si iskood ah u gala isticmaaleyaasha shabakadda, foomamka laga heli karo bogagga shabakadda.
by ururin otomaatig ah diiwaannada shabakadda ee hawl wadeenka martigeliyaha.
Faylasha cookie (oo loogu yeero "cookies") waa macluumaadka IT, gaar ahaan feylasha qoraalka, kuwaas oo lagu keydiyo aaladda dhamaadka adeegsiga ee loogu talagalay isticmaalka bogagga shabakadda. Kukiyada ayaa had iyo jeer leh magaca websaydhada ay ka yimaadeen, wakhtiga kaydinta aaladda dhamaadka iyo lambar gaar ah.
Inta lagu guda jiro booqashada websaydhka, macluumaadka isticmaalayaasha websaydhku si otomaatig ah ayaa loo ururin karaa, oo la xiriira booqashada isticmaale ee websaydhka, oo ay ku jiraan, kuwa kale, Cinwaanka IP, nooca biraawsarka bogga, magaca bogga, lambarka aragtida bogga, nooca nidaamka hawlgalka, booqashooyinka, xallinta shaashadda, tirada midabada shaashadda, cinwaannada websaydhada laga soo geliyey websaydhka, waqtiga isticmaalka bogga. Xogtaasi ma aha xog shaqsiyeed, mana u oggolaanayaan aqoonsashada qofka isticmaalaya websaydhka.
Websaydhka waxaa ku jiri kara xiriiriyeyaal boggag kale. Mulkiilaha websaydhku mas'uul kama ahan dhaqannada asturnaanta ee degellooyinkaas. Isla mar ahaantaana, milkiilaha websaydhku wuxuu ku dhiirrigeliyaa isticmaale websaydhka inuu akhriyo siyaasada gaarka ah ee laga sameeyay degellooyinkaas. Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ma quseeyo websaydhada kale.
Hay'adaha dhigaya cookies-ka qalabka aaladda adeegsadaha ee websaydhada isticmaala oo galaangal u leh iyaga ayaa leh milkiilaha websaydhka.
Kukiyada waxaa loo isticmaalaa in:
hagaajinta nuxurka boggaga websaydhka dookha websaydhka dookhiisa iyo wanaajinta adeegsiga websaydhada; gaar ahaan, feylashaani waxay u oggolaadaan inay aqoonsadaan aaladda isticmaaleha websaydhka oo ay si sax ah u soo bandhigaan websaydhka, oo ku habboon baahiyadiisa shaqsiyeed,
abuurista tirakoobyo gacan ka geysanaya fahamka sida adeegsadayaasha websaydhada u adeegsadaan websaydhada, taas oo u oggolaaneysa hagaajinta qaab dhismeedkooda iyo waxa ku jira,
joogteynta kalfadhiga isticmaale ee websaydhka (ka dib marka uu soo galo), Thanks taas oo aan qasab ku aheyn inuu dib u galo galkiisa iyo furaha sirta ah bogga kasta ee websaydhka.
Websaydhku wuxuu adeegsadaa noocyada soosocda ee cookies:
Kukiyada "lagama maarmaanka ah", oo awood u siineysa isticmaalka adeegyada laga heli karo websaydhka, tusaale ahaan, cookies cookies,
cookies loo isticmaalay si loo hubiyo amniga, tusaale ahaan loo isticmaalay in lagu ogaado waxyeelada,
Kukiyada "Performance", oo loo adeegsaday in lagu helo macluumaad ku saabsan adeegsiga bogagga mareegaha ee adeegsadayaasha websaydhada,
Kukiyada "xayeysiinta", oo u ogolaanaya isticmaaleyaasha websaydhada inay bixiyaan waxyaabaha xayeysiinta ah ee ku habboon danahooda,
Kukiyada "shaqeynaya", awood u siinta "xasuusinta" dejimaha uu soo xulay isticmaaleha websaydhka iyo la qabsiga websaydhka adeegsadaha websaydhka, tusaale ahaan xagga luqadda la xushay.
Websaydhku wuxuu adeegsadaa laba nooc oo aasaasi ah oo ka mid ah buskudyada: cookies cookies fadhiga iyo cookies joogto ah. Kukiyada kulanku waa faylal ku meel gaar ah oo lagu keydiyo aaladda dhamaadka ilaa ay ka baxaan websaydhka, ka baxaan qofka isticmaala websaydhka ama damiya softiweerka (biraawsarka bogga). Kukiyada joogtada ah waxaa lagu keydiyaa aaladda dhamaadka adeegsiga bogga wakhtiga loogu cayimay cabirrada faylasha cookie ama ilaa ay ka tirtirayaan isticmaaleyaasha websaydhka.
Xaaladaha badankood, softiweerka loo adeegsaday bogagga internetka wuxuu u oggolaanayaa cookies-ka in lagu keydiyo aaladda dhammaadka aaladda adeegsadaha. Isticmaalayaasha websaydhadu waxay leeyihiin ikhtiyaar inay u beddelaan goobaha cookie wakhti kasta. Nidaamyadan waxaa lagu beddeli karaa xulashooyinka biraawsarka shabakadda (softiweer), inter alia, hab looga hortago in si otomaatig ah loola macaamilo cookies ama lagu qasbo isticmaaleha websaydhka in lagu wargaliyo mar kasta oo cookies lagu dhejiyo aaladda. Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan suurtagalnimada iyo qaababka loo maareeyo cookies waa laga heli karaa goobaha biraawsarka bogga.
Xaddidaadaha isticmaalka kukiyada waxay saameyn ku yeelan karaan qaar ka mid ah howlaha laga heli karo bogagga shabakadda.
Kukiyada ayaa la geliyaa aaladda dhamaadka isticmaaleha websaydhka sidoo kale waxaa adeegsan kara xayeysiiyayaal iyo shuraakeyaal la shaqeynaya milkiilaha websaydhka.
Socodsiinta xogta shaqsiyeed, macluumaadka ku saabsan foomamka
Xogta shaqsi ee adeegsadayaasha websaydhka waxaa maamuli kara Maamulaha:
haddii isticmaalaha websaydhku ogolaado inuu u diro foomamka lagu soo dhejiyay bogga, si ficil loogu sameeyo foomamkan la xidhiidha (Qodobka 6 (1) (a) ee GDPR)) ama
Markay hawluhu ubaahantahay fulinta qandaraaska kaas oo adeegsadaha websaydhku uu yahay xisbi (Qodobka 6 (XNUMX) (b) ee GDPR)), haddii websaydhku uu awood u siinayo dhammaystirka heshiiska u dhexeeya Maamulaha iyo isticmaaleha websaydhka.
Iyada oo qayb ka ah websaydhka, macluumaadka shakhsiga ah ayaa si iskiis ah looga baaraandegaa adeegsadayaasha websaydhada. Maamulaha ayaa socodsiiya xogta shaqsiyadeed ee adeegsadayaasha websaydhada kaliya ilaa inta lagama maarmaanka u ah ujeedooyinka ku xusan qodobka 1 lit. a iyo b kor iyo muddada lagama maarmaanka u ah in lagu gaaro yoolalkaas, ama ilaa isticmaaleha websaydhka ka noqdo oggolaanshahooda. Ka gaabinta bixinta macluumaadka isticmaalaha websaydhka ayaa laga yaabaa, xaaladaha qaarkood, inay sababaan karti la'aanta in lagu gaaro ujeeddooyinka bixinta macluumaadka loo baahan yahay.
Macluumaadka shaqsiyeed ee soo socda ee isticmaaleha websaydhka waa la soo qaadi karaa iyadoo qayb ka ah foomamka lagu dhajiyay bogga ama si loo sameeyo qandaraasyo lagu soo gabagabayn karo qayb ka mid ah websaydhka: magaca, magaca, cinwaanka, cinwaanka e-maylka, lambarka taleefanka, galitaanka, erayga sirta ah.
Xogta kujira foomamka, oo uu ku siinayo Maamulaha isticmaaleha websaydhka, waxaa ku wareejin kara Maamulaha qeybaha seddexaad ee kala shaqeynaya Maamulaha laxiriirta fulinta ujeedooyinka lagu qeexay qodobka 1 (a). a iyo b kor ku xusan.
Xogta lagu bixiyay foomamka websaydhka waxaa loo maareeyay ujeedooyin ka dhashay shaqada qaab gaar ah, intaas waxaa u sii dheer, waxaa loo isticmaali karaa Maamulaha sidoo kale ujeedooyin tirakoob. Oggolaanshaha mawduuca xogta waxaa lagu muujiyaa iyadoo la hubinayo daaqadda ku habboon foomka.
Isticmaalaha websaydhka, haddii degelku leeyahay hawlahan oo kale, adoo fiirinaya daaqadda ku habboon ee foomka diiwaangelinta, ayaa diidi kara ama oggolaan kara in la helo macluumaadka ganacsiga iyada oo loo marayo habka isgaarsiinta, iyada oo la raacayo Sharciga 18 Luulyo 2002 ee bixinta adeegyada elektiroonigga ah ( Journal of Law of 2002, Lambarka 144, sheyga 1024, sida wax laga baddalay). Haddii isticmaaleha websaydhku oggolaaday inuu helo macluumaadka ganacsiga ee ku saabsan isgaarsiinta elektiroonigga ah, wuxuu xaq u leeyahay inuu ka noqdo oggolaanshahaas wakhti kasta. Adeegsiga xuquuqda ka noqoshada ogolaanshaha si loo helo macluumaadka ganacsiga waxaa lagu fuliyaa iyadoo la diro codsi ku habboon e-mayl cinwaanka milkiilaha websaydhka, oo ay ku jiraan magaca iyo magaca milkiilaha websaydhka.
Xogta lagu bixiyo foomamka waxaa loo wareejin karaa hay'ad farsamo ahaan siisa adeegyo gaar ah - gaar ahaan, tan waxay quseysaa wareejinta macluumaadka ku saabsan milkiilaha bogga diiwaangashan hay'adaha maamulayaasha shabakadda internetka (qaasatan Shabakadda Sayniska iyo Tacliinta tacliinta tacliinta - NASK), adeegyada lacag bixinta ama hay'adaha kale, kaas oo Maamulaha iskaashi ka siiyo arrintan.
Xogta shaqsiyadeed ee adeegsadayaasha websaydhada waxaa lagu keydiyaa keydka macluumaadka talaabooyinka farsamo iyo abaabul loo adeegsaday si loo hubiyo ilaalinta macluumaadka la baarayay iyadoo la raacayo shuruudaha lagu dejiyey xeerarka la xiriira.
Si looga hortago dib-u-diiwaangelinta dadka ka qeybgalkooda websaydhka la joojiyay adeegsiga rukhsad la'aanta ee adeegyada bogga, Maamulaha ayaa diidi kara inuu tirtiro macluumaadka shaqsiyadeed ee lagama maarmaanka u ah inuu horjoogsado suurtagalnimada dib-u-diiwaangelinta. Aasaaska sharciga ah ee diidmada waa Art. 19 sadar 2 dhibic 3 xiriir la leh Art. 21 sek. 1 ee Sharciga Luulyo 18, 2002 ee ku saabsan bixinta adeegyada elektiroonigga ah (sida Oktoobar 15, 2013, Journal of Law of 2013, qodobka 1422). Diidmada Maamulaha in la tirtiro xogta shaqsiyadeed ee adeegsadayaasha websaydhada sidoo kale waxay ku dhici karaan kiisas kale oo uu sharcigu oggol yahay.
Xaaladaha uu sharcigu dhigayo, Maamulaha ayaa shaaca ka qaadi kara qaar ka mid ah macluumaadka shakhsiyadeed ee adeegsadayaasha websaydhada qaybaha saddexaad ujeeddooyinka la xiriira ilaalinta xuquuqda dhinacyada saddexaad.
Maamulka ayaa xaq u leh inuu u soo diro emaylka dhammaan isticmaaleyaasha websaydhada ogeysiisyada ku saabsan isbedelada muhiimka ah ee bogga iyo isbeddelada ku yimaada Nidaamka Asturnaanta. Maamulaha waxaa laga yaabaa inuu diro waraaqaha elektiroonigga ah ee ganacsiga, gaar ahaan xayeysiinta iyo macluumaadka kale ee ganacsiga, haddii uu isticmaalaha degelku oggolaaday. Xayeysiiska iyo macluumaadka kale ee ganacsi ayaa sidoo kale lagu dhejin karaa waraaqaha soo gala iyo kuwa baxaya ee ka socda koontada nidaamka.
Adeegyada xuquuqda isticmaaleyaasha ee ku saabsan xogtooda shaqsiyeed Sida ku xusan Qod. 15 - 22 GDPR, degel kasta oo isticmaale wuxuu leeyahay xuquuqahan soo socda:
Xuquuqda helitaanka xogta (Qodobka 15aad ee GDPR)Mawduuca xogta wuxuu xaq u leeyahay inuu ka helo xaqiijinta Maamulaha haddii ay jirto in macluumaadka shaqsiyadeed ee isaga ama iyada ku saabsan la falanqeynayo, iyo haddii ay sidaas tahay, helitaankooda. Sida ku cad Qod. Maamuluhu wuxuu siin doonaa mawduuca xogta nuqul ka mid ah xogta shakhsiga ah ee hawsha ku socota.
Xuquuqda aad u leedahay sixitaanka xogta (Qodobka 16-aad GDPR)Mawduuca xogta wuxuu xaq u leeyahay inuu ka codsado Maamulaha inuu si dhakhso leh u saxo xogta shaqsiyadeed ee khaldan ee isaga khuseysa.
Xuquuqda in la tirtiro xogta ("xuquuqda in la iloobo") (Qodobka 17aad ee GDPR)Mawduuca xogta wuxuu xaq u leeyahay inuu ka codsado Maamulaha inuu si dhakhso leh u tirtiro xogtooda shaqsiyeed, Maamulaha waxaa ku waajib ah inuu tirtiro macluumaadka shaqsiyeed iyadoon dib loo dhigin haddii duruufaha soo socda midkood dhacaan:
xogta shaqsi ahaaneed uma sii baahna ujeeddooyinka loo soo uruuriyay ama haddii kale laga baaraandegay;
Mawduuca xogta ayaa ka noqotay ogolaanshaha hawsha ay ku saleysan tahay
xogta maaddada waxay kuxirantahay howsha iyadoo la raacayo Art. 21 sek. 1 ka soo horjeedda howsha mana jiraan wax sharciyeysan oo loo cuskaday oo ku saabsan ka shaqeynta
Xuquuqda xaddidaadda hawsha (qodobka 18aad ee GDPR)Mawduuca xogta wuxuu xaq u leeyahay inuu ka codsado Maamulaha inuu xaddido howsha soo socota xaaladaha soo socda:
Marka xogtu khaldantahay - waqtiga saxda ah si loo saxo
Mawduuca xogta ayaa diidey iyada oo la raacayo Qod. 21 ilbidhiqsi 1 diidmada howsha - illaa inta laga go'aaminayo in sababaha sharciga ah ee Maamulaha uu ka takhaluso sababaha diidmada mawduuca xogta
Hawsha ayaa sharci darro ah oo mawduuca xogta ka soo horjeedaa ciribtirka xogta shaqsiga wuxuuna codsanayaa xaddidaadda isticmaalkooda.
5. Xaq u lahaanshaha xogta (Qodobka 20 GDPR)Mawduuca xogta wuxuu xaq u leeyahay inuu helo, qaab qaabeysan, inta badan loo isticmaalo, qaab akhriska lagu akhrin karo, macluumaadka shaqsiyeed ee la xiriira isaga, kaasoo uu siiyay Maamulaha, wuxuuna xaq u leeyahay inuu u diro xogtan shaqsi maamule kale iyadoon wax carqalad ah ka aheyn qeybta Maamulaha loo siiyey xogtaan shaqsiyadeed. Mawduuca xogta wuxuu xaq u leeyahay inuu codsado in macluumaadka shaqsiga ah uu u diro Maamulaha si toos ah maamule kale, haddii farsamo ahaan suuragal tahay. Sharciga lagu sheegay qaybtan ayaan si xun u saameyn doonin xuquuqaha iyo xorriyadda kuwa kale.
6. Xaqa aad u leedahay in la diido (Art. 21 GDPR)Haddii xogta shakhsiga ah looga baaraandego ujeedooyin suuqgeyn toos ah, mawduuca xogguhu wuxuu xaq u leeyahay inuu diido waqti kasta ka shaqeynta xogtiisa shaqsiyeed ujeedooyinka suuq geynta noocan oo kale ah, oo ay ku jirto muujinta, illaa heerka howshu la xiriirto suuqgeynta tooska ah. .
Hirgalinta xuquuqaha kor ku xusan ee isticmaaleyaasha websaydhku waxay ku dhici karaan ka hor imaanshaha bixinta kiisaska sharciga khuseeya uu ogol yahay.
Haddii ay dhacdo jebinta xuquuqaha kor ku xusan ama isticmaaleha websaydhku markuu helo in xogtiisa shakhsiga ah ay maareeyaan Maamulaha oo ka hor imanaya sharciga khuseeya, isticmaaleha websaydhku wuxuu xaq u leeyahay inuu dacwad u gudbiyo maamulka kormeeraha.
Sida ku xusan dhaqanka la aqbali karo ee websaydhyada badankood, hawlwadeenka websaydhku wuxuu keydiyaa weydiimaha http ee loogu talagalay maamulaha shabakadda (macluumaadka ku saabsan qaar ka mid ah habdhaqanka isticmaaleyaasha websaydhada ayaa kujira lakabka serverka). Kheyraadka la baaray waxaa lagu gartaa cinwaannada URL. Liiska saxda ah ee macluumaadka ee lagu keydiyay faylasha faylasha websaydhku waa sidan soo socota:
cinwaanka IP-ga dadweynaha ee kombiyuutarka ay baaritaanku ka yimid,
magaca saldhiga macmiilka - aqoonsi uu sameeyay borotokoolka http, haddii ay suuragal tahay,
Magaca adeegsadaha ee websaydhka oo lagu bixiyay habka oggolaanshaha (galitaanka),
waqtiga imaatinka baaritaanka
Nambarka jawaabta http,
tirada bayaano uu soo diray adeegaha,
Cinwaanka URL bogga hore ee uu booqday isticmaaleha websaydhka (xiriiriiyaha tixraaca) - haddii websaydhka laguhelay xiriir,
macluumaadka ku saabsan bog furaha bogga adeegsadaha,
macluumaadka ku saabsan khaladaadka dhacay intii lagu guda jiray fulinta isuduwaha http.
Xogta kor ku xusan lama xiriirto dad gaar ah oo daalacanaya bogagga laga heli karo websaydhka. Si loo hubiyo tayada ugu sarreeya ee websaydhka, hawlwadeenka websaydhku mararka qaar wuxuu falanqeeyaa faylasha diiwaanka si loo go'aamiyo boggaga ku jira websaydhada sida joogtada ah loo booqdo, kuwa daalacashadaha webka loo adeegsado, haddii qaab dhismeedka websaydhadu ay ku jiraan khaladaad, iwm.
Diiwaannada uu ururiyo hawlwadeenku waxaa lagu kaydinayaa muddo aan xad lahayn sida maadama kaaliyeyaal ah oo loo adeegsado maareynta habboon ee websaydhka. Macluumaadka ku jira macluumaadka looma sheegi doono hay'ad kasta oo aan ka ahayn wadaha ama hay'adaha la xiriira hawl wadeenka shaqsi ahaan, maal ama qandaraas ahaan. Iyada oo ku saleysan macluumaadka ku jira faylalkaas, tirakoobyada waxaa loo abuuri karaa si ay gacan uga geysato maamulidda websaydhka. Soo koobitaanka ay ku jiraan tirakoobka noocan ah kuma jiraan astaamaha lagu garto dadka soo booqda bogga.